Isticmaalka internetka ee komputerka (PC) oo qadka kasii baxaayo. - iftineducation.com
LONDON- Mudo kooban afarsano dib udanbeyso, isticmaalka internetka ee qadka tabletka iyo telefonada gacanta ayaa lasheegay iney qadka kasaari doonaan isticmaalka internetka ee qadka PC ga, sida lagu sheegay cilmi baaris cusub.
Sida lagu qooray PC Advisor, Arbaco (14/9/2011), dunida PC ga sidaas ay tahay wali qadka kama bixin laakiin waxaa lasheegay in cimrigeeda kaharay maalmo latiriyo. Maxaa yeelay cilmi barista IDC waxey ku qiyaaseysaa in isticmaalka internetka ee qadka PC ga waxaa qadka kabixin doona kan tabletka iyo telfonada gacanta sanadka 2015.
“si isbarbardig ah, dirada online ka ah ee isticmaasha pc ga oo hoos usii dhacaayo sitartiib tartiib ah, “ sida aysheegeen IDC, sida kucad warbixintooda.
Isticmaalka internetka ee qalabka mobilekan waxey ka bilaabandoontaa amerika,Eropada galbeed, Jepan iyo waxaa soo xiga kadib dunida kale.
IDC naftirkeeda waxey saadaalisay in 40% dirada shacabka aduunka, ama malo 2,7 bilyan qof ayaa ka isticmaali doono internetka sanadka 2015, marka loo eego korukaca tirada 2 bilyan sanadkii 2010.
Intaas waxaa siidheer IDC xita waxey saadaalisay in aduunka xayasiinta ee online ka aduunkoo idil xita ay kor ukici doonto labo jibaar qiimaha halkii ay ka aheyd USD70 bilyan (2010) ay noqondoonto USD380 bilyan sanadka 2015.
Sidaas daraded maladhihikara cilmibaristan in qad kabixitaanka PC ga bilowday? Maya, maxaa yeelay shirkadaha soo saaro PC ga wali waxey sameeynayaan malaayiin qalabka komputerka sanad walbo. Wali waa kafogtahay in ladhoho aduunka PC ga qadka ayuu kasii baxayaa, maxaa yeelay xaqiiq ahaan Ganacsiga PC ga wali wuu jiraa.